I-Erriottwood Cottage-iNdawo efihlakeleyo yeLizwe efihlakeleyo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSharon
Indlu yeGadi evaliweyo ekhethekileyo ebekwe kwi-hamlet yase-Erriottwood enembono kuyo yonke igadi yeziqhamo ezi-2. Kukho igadi yakho yabucala, indawo yokupaka, indawo yokufihla intloko, indlu yasehlotyeni (ukufumana indawo yokuhlala eyongezelelweyo ukuba iyafuneka) okanye uphumle ngekofu yasekuseni okanye itipple yangokuhlwa kunye nebhafu eshushu yokuphumla emva kokuhamba umgama omde kwiShared Wood engummelwane. Kufuphi kukho ibhaso eliphumelele ibhaso leButchers eDoddington kunye neholo lokutya elikuMazantsi Mpuma eMacknade Farm eFaversham.
Igadi ibucala kakhulu kwaye inebhafu eshushu esetyenziselwa kuphela i-Erriottwood Cottage ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho enye indlu yasehlotyeni eyongezelelweyo, igadi eyenziwe ngamaplanga kunye nomthi ojingiweyo kunye nemithi ikhanyisa ixesha lasebusuku ngezibane zelanga..
Kukwakho negadi esemthethweni eneziphumlisi kunye ne-gazebo enendawo yokutyela.
Zonke ezi zinto zingasentla zikwindawo ephantsi ebiyelweyo yegadi.
I-Erriottwood yindawo esemaphandleni nje esemazantsi e-Lynsted nakumnyango we-Shasted Wood apho unokuhamba uye kwi-pub enobuhlobo ukuba i-George e-Newnham okanye ukuba yindlu eyimbali oyifunayo emva koko uya kuyifumana ekupheleni. ukuba Sharsted wood Doddington Place Gardens kunye nembasa iibhula Dougherty's.
Iyafumaneka kwisiza ukuba iyafuneka okanye ngefowuni okanye nge-imeyile .
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lynsted